I-Convair 990A ne FSX
Umbuzo I-Convair 990A ne FSX
iminyaka 2 11 izinyanga ezedlule #155 by FCAIR
I am a Fan Big kakhulu Convair 880 & 990. wayezama ukuthola eyodwa efakwe nge-VC ngoba Izinyanga eziningana kungekho inhlanhla. Ingabe ukhona 880 noma 990 nge-VC ukuthi babeyoba ethanda ukuhlanganyela. Ngiye Uzame ukufaka HJG convairs kodwa abezi e game. Ngemva kwemizamo eminingana ukuze uzenze ukusebenza ekugcineni ngaqaphela baye nje badela ngoba ungenayo VC kunjalo. Ngolunye usuku ngathola eyodwa kwi Virtual Amasayithi wezindiza ababethi AA ekuseni 60 sika Paint ke sibonakala umdlalo kodwa akukho VC. Angiyena ifayela umfana omkhulu namanje ukufunda kodwa ngikubonile okuthunyelwe ngokungeza VC kuzindiza nabo ngakho Bengizibuza nje uma noma ubani lapha azi ukuthi angakwenza kanjani lokhu noma kungaba qondisa me lapho ngingakwazi ukufunda le nqubo. Ngiyabonga kusengaphambili
iminyaka 2 11 izinyanga ezedlule #156 by douglasjaen
iminyaka 2 11 izinyanga ezedlule #158 by Gh0stRider203
ok kuphi lokhu ubuhle ??? Ngimelwe umengeze Iqoqo lami!
Kepha inkinga VC, Ngikholelwa ngobuqotho awazi indoda. Angikaze ngobuqotho waba fan of the VC ngaphandle uma ku CS C-130 noma 707
iminyaka 2 11 izinyanga ezedlule #159 by Gh0stRider203
Lemme okuthunyelwe FB Iqembu ngingenile .... mhlawumbe othile ngeke ukwazi!
iminyaka 2 11 izinyanga ezedlule #163 by FCAIR
virtualaal.weebly.com/fleet.html Lona lapho ngathola ukulanda kusuka.
iminyaka 2 11 izinyanga ezedlule #164 by Gh0stRider203
Ya ukwazi ... mina ongasebenzisa pilot ezinhle ezimbalwa uma unentshisekelo
iminyaka 2 11 izinyanga ezedlule #166 by FCAIR
Ngintsha kakhulu kimi FSX Ngeke ngizibheke njengomshayeli omuhle okwamanje. Kepha nginesifiso sokwenza okuthile njengoba ngithuthuka ku-sim. Futhi iMelika iyintandokazi Yezindiza Yami lezo izindiza zakuqala ngopende. Ungalokothi Wazi ..
iminyaka 2 11 izinyanga ezedlule #167 by Gh0stRider203
inqobo nje uma ungathola kusuka iphuzu a ukhombe b, futhi kungaba kiss evulekile ku lokubikezela, wenza kahle lol. njengamanje indiza endala esinayo Boeing Clipper 314 wesibili omdala yayiyoba 707
Isikhathi ukudala page: 1.089 imizuzwana